Thwebula Link2SD 4.0.12 – Vessoft
Link2SD – a isofthiwe ukuphatha amafayela bese udlulise izicelo ikhadi le-SD. Isofthiwe ikuvumela ukubuka ulwazi mayelana izicelo, ukudlulisa, ukusula cache kanye nedatha, ukuguqula izicelo ezivamile zibe yibo ohlelweni, njll Link2SD ikuvumela ukuba wamisa idivayisi ukufaka ngokuzenzakalelayo izicelo ikhadi le-SD. Isofthiwe uyakwati kudlulisela apk kanye Dalvik-cache amafayela on ukwahlukanisa obengeziwe imemori khadi. Link2SD futhi ubonisa isikhala isitoreji idivayisi, ikhadi le-SD kanye ngodonga yayo, umthamo cache uhlelo idatha.
Idlulisela apk kanye davlik-cache amafayela
Amasethingi ukulanda amafayela ngokuzenzakalelayo ekhadini le-SD
Amazwana on Link2SD:
Link2SD Ahlobene software:
English, Français, Español, 中文... PlayStation 2.55.8